Iindaba -Uyikhetha njani iSilayidi seBhola elungileyo
Kutshanje, abanye abahlobo bokuhombisa amakhaya, bandicela ukuba ndithenge izilayidi zefanitshala ukuhoya ezo zinto. Ngoku ndabelana ngamava am nawe:
ukhetho lwe Isilayidi esinebhola sinokuba kwezi mvavanyo zilandelayo ukukhetha umgangatho wejelo lensimbi yeteleskopu:
1. Ukuthenga Ibhola yedrowa yesilayidi isilayidi kuqala ixhomekeke kwinkangeleko yebhola ethwele isilayidi, ukubona ukuba umphezulu weemveliso uphathwe kakuhle okanye akunjalo, akukho zimpawu zirusi.
2. Jonga ukutyibilika nokwakheka kwe Ibhola ethwele idrowa yembaleki, bamba umzila osisigxina webhola ephethe iibheringi zedrowa, emva koko uthambise iidigri ezingama-45 ukubona ukuba ingatyibilika ngokuzenzekelayo ukuya esiphelweni (ezinye iimbaleki ezinobunzima obufutshane beedrowa azikwazi ukutyibilika ngokuzenzekelayo ngenxa yobunzima obungonelanga, into eqhelekileyo). Ukuba inokutyibilika kude kuye esiphelweni, ukuguda kwebhola ekhatywayo yeembaleki kusenokwenzeka. Emva koko tsala umgaqo kalayidi uye esiphelweni, isandla esinye sibambe umzila osisigxina, esinye isandla siphethe isiporo esijikelezayo, sijija sinyuka sisihla, ukuze uzame ubume kunye nokusebenza kwesilayidi sesilayidi, kungcono ukhethe kancinci ujikelezisa uloliwe wesilayidi.
3. Jonga ukutyeba kwezinto ezisetyenzisiweyo kwitshaneli ye-telescopic drawer, kwaye izinto ezisetyenziswa yiWALITON zi-1.2 / 1.2 / 1.5 mm ngexesha kunye ne-1.0 / 1.0 / 1.2 mm. Izinto ezisetyenziselwa ijelo ledrowa sisiseko sentsimbi ebandayo, kunye nentsimbi engenasici. Xa sikhetha kwaye sithenga, kuya kufuneka sithathe isigqibo sokuba sizisebenzisa phi iiteleskopu. Kwiindawo ezimanzi ezifana neekhabhathi zangasese, kufuneka sisebenzise izilayidi zensimbi ezingenasici. Kwiidrowa ngokubanzi, kufuneka sisebenzise izilayidi zentsimbi eziqengqelekayo ezibandayo.
Ukuqinisekiswa kwemigangatho ye-4 yeendlela zesilayidi (njengokuthi zingaphi iziqinisekiso zokuvavanywa komgangatho ogunyazisiweyo ezinokugqithiswa yi-SGS) kunye nokuqinisekisa ngokhuseleko okuthenjiswe ngabavelisi.
I-GERISS HARDWARE ngumvelisi webhola ovelisa isilayidi e-China ukusukela ngo-1999. Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yemveliso kunye namava okuthengisa. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Inombolo yomnxeba: 0086 21 66368006
Ifeksi: 0086 21 66368005
Umphathi Wezentengiso Wamanye Amazwe: UJames Peng
Ifowuni: +8613764528018 (Wechat / WhatsApp)